जनमत सर्वेक्षण - भावी सभामुख को हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
अनुभवका आधारमा सुबास नेम्वाङको सम्भावना धेरै देखिन्छ भने पार्टी एकीकरण अघि भएको सहमति अनुसार सभामुख पद पूर्व माओवादीले पाउनुपर्ने सर्त अनुसार सापकोटाको पनि सम्भावना देखिन्छ । नेकपामा अहिले भावी सभामुख सुवास नेम्वाङ वा अग्नि सापकोटाको बनाउने भनेर बहस भईरहेको छ ।
१. सुवास नेम्वाङ
२. अग्नि सापकोटा